Ivon’ny faha-55 taona: mikarakara fikaonan-doha manokana ny Fimpima | NewsMada
Ivon’ny faha-55 taona: mikarakara fikaonan-doha manokana ny Fimpima
Mitombo hatrany ny sehatra ivelaran’ny kabary. Iray amin’ireny ny ezaka ataon’ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy (Fimpima). Hanatanteraka hetsika lehibe iray ry zareo ho ambohi-pihaonan’ny olon-drehetra.
Ny 16 novambra izao, feno 55 taona katroka ny nijoroan’ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy na ny Fimpima. Hanatanteraka « Tafasiry », fikaonan-doha manokana hanasana ny olon-drehetra izy ireo, amin’io andro io. Hetsika hotanterahina eny amin’ny Akademia Malagasy eny Tsimbazaza, manomboka amin’ny 9 ora maraina ka hatramin’ny 5 ora tolakandro. Fikaonan-doha nosalorana ny lohahevitra « Mpikabary mifaribolana, mikarajia an-kihitse ». Raha ny fanazavana natao tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena, omaly, manambara fifanakalozan-kevitra miompana amin’ny lohahevitra iray ary anehoana lalan-tsaina voarindra sy marim-pototra ny hevitry ny « mikarajia an-kihitse » .
Hanana endrika roa ny fandraisana anjara. Fanolorana velakevitra fanehoana voka-pikarohana momba ny kabary. Fampahafantarana tsotra ny zava-mahaliana samihafa momba ny kabary sy ny teny malagasy (tantarany, fombafomba mifamatotra aminy isam-paritra, karazany, sns.). Anisan’ny tanjona kendrena ny hahafantarana bebe kokoa ny momba ny kabary malagasy.
Ireo handray anjara amin’ny fitarihana ny velakevitra
“ Ny haifizaka sy haifiseho imasom-bahoaka” ( Dr Rabenalisoa Ravalitera Jean, mpampianatra mpikaroka, mpikambana mahefa ao amin’ny Akademia Malagasy ). “ Ny lanjan’ny fahaiza-miteny teo amin’ny fampielezana ny fivavahana kristiana teto Imerina”.
(Ranjatohery Harilala, mpahay tantara, mpampianatra tantara, mpikambana mahefa ao amin’ny Akademia Malagasy). “Ny kabary mandrindra ny serasera tao Manjakadoria”
(Andriamboavonjy Hanitra, mpikambana mpifandray amin’ny Akademia Malagasy)
“Ny kabary hoenti-miatrika ny taona arivo fahatelo, andrana sy vina”. Rakotoniaina Bearisoa Printsy, mpahay tantara, mpampianatra mpikaroka. “Ny famadihana ao amin’ny faritr’i Vakinankaratra” (Rakotoasimbola Apollin, mpampianatra). “Ny fandiam-bolagna betsileo eo anivon’ny fiarahamonina”. (Andriamalazaony, mpitahiry ny fomban-drazana). “Fagnotsafana amin’ny fananganana mpanjaka amin’ny fomba Matitanana” (Jean Robert Veloniaina, mpitazona tranobe, i Roland Felice), mpitahiry fomban-drazana, (Razanatovo Urnhases Emilien, mpianatra ao amin’ny Anjerimanontolo). “Velona asara tsy ritra maintany” (Ratsimbazafy Bernard, mpanabe). “La politique d’Andrianampoinimerina sur les Vazimba à travers les kabary » (Rajoelinoro Marie Robertine, mpampianatra mpikaroka). “Ny fiantraikan’ny kabary eo amin’ny fiarahamonina manoloana ny fanatontoloana” (Rabarijaona, Mpampianatra mpikaroka. Anjerimanontolon’Antananarivo). “Ny fifandraisan’ny kabary sy ny angano” (Paul Congo, mpikaroka ny fomban-drazana any amin’ny faritra avaratry ny Nosy).